Dubbisuun 'spa' irra siif wayyinnaa? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa (bitaa gara mirgaatti) Niinkee, Helen, Naaaniifi Annee agarsiisu dubbisuu dhiyenya kanaa irratti
Waa'ee agarsiisa 'Yoga' fi 'spa', akkasumas agarsiisa og-barruu ykn agarsiisa suuraa dhageessanii beektu ta'a. Waanti gara fuula duraatti ittiin bohaaruuf ta'u garuu agarsiisa dubbisuu ta'innaa?
Ani nomoota kitaabota isaanii waliin guyyaa ayyaanaa isaanii gara Toorpeensi Saafook keessatti argamuutti makamuun barbaada.
Galgala kana hirbaanni daqiiqaa shanii turuusaatiif Kireesiidaa Daawooniingi dhiifama gaafatti, kunis hanga Anneen kutaa kitaabaa dubbistu xumurtutti eeguudha.
Namni hubate garuu kan jiru hin fakkaatu.
Gara agarsiisa dubbisaa keessummoonni alkan sadiif hanga £450 kaffalaniifi akka barbaadanitti cufatanii dhuunfaa isaaniitiin dubbisuu danda'anii baga nagaan dhuftan.
'Eyyama ofiif kennuu'
Warra hundeessan keessaa tokkoofi gulaaltuu kan taate Kireseendaan akkas jetti: "Yaadni kun kan naaf dhufe yeroo rakkisaa waggaa tokko ani keessa ture keessatti abbaan manaakoo 'maaliif gara agarsiisa 'spa' hin deemtu?' naan jedhe. Anis sirriitti akkan danda'un yaade, garuu kitaabonni koo ni dagatamu.
"Kan ani barbaade ture agarsiisa dubbisaati. Tokkoyyu garuu argachuu hin dandeenye. Anis kan barbaadu ana qofaa akka hin taanen yaade!"
Achumaan waa'ellawwan ishee ogeettii suuraa Saaraa No'el, Kiressindaa waliin ta'uudhaan Agrasiisa Dubbisuu yeroodhaafii hundeessan.
Agarsiifni kun kan raawwatu bakka mijataa qarqara galaanaattidha ykn mana citaa baadiyyaatti. Seera tokko qofatuu jira garuu, innis kutaan itti dubbisan yeroo mara callisaa ta'uu qaba.
Goodayyaa suuraa Dubbistoonni akka barbaadanitti soofaarra ykn kutaa hirbaataa hirkatanii dubbisuu ni danda'u
Anneen, hojjettuun dhimma komee yunvarsiitii, agarsiisa kitaabaa kanaaf isa lammaffaadha. Yeroo ani manatti dubbisuun maallaqa qusachuu akka dandeessu yaada dhiyeessuuf ni kofalti.
"Kuni dubbisakootiif dursa kennuuf eyyama ofiif kennuudha," jettee natti himte. "Yoo mana ture, hojii biroo kan akka hiriyoota gaafachuu, barreessuu, qulqulleessuu, hodhuufaa hojjechuu akkan qabun yaada.
"Asitti garuu ibidda boba'u bira taa'ee saatii dheeraaf kitaabotakoo waliin deemuu nan danda'a."
Bara addunyaa yeroo beelofte kanatti ayyaanni waggaa dubbisuuf ramadamu dabalaa dhufeera, dhaabbileen gara garaas tajaajila mijaawaa sadarkaa gara garaa qabu kennaa jiru.
Daawwannaan tokko tokko yeroo dhuunfaa itti of ilaalan akkasumas dubbisan dhiyeessu. Kanneen bashananan, dhugaatiifi bakka fagoo geessanii bakkee daawachiisanis jiru.
Bakeewwan daawwannaa gara graa galmi isaanii tokko innis yeroo dubbisuun malu keessaa daqiiqaa 20 nama jalaa hatuudha. akka namni qalbiidhaan kitaaba dubbisuurra ta'u osoo hin taane akka namni waan biraatti yeroo balleessu taasisu.
Helen, kan oguummaan Saayikaatiristi taateefi dinqiisiifattuu Agaataa Kiristii kan taate guyyaa ishee bijaamaa huffattee, yeroo muraasaaf qofa kitaabarraa fuula muraasa darbee darbee kan ilaaltu turte.
Kutaa ciisichaa keessatti dubbisuu ishee ni yaadatti garuu mana dubbisaa waloo keessatti nomoota biroo waliin callisaan dubbisuu jaaallatti.
Goodayyaa suuraa Helen mana dubbisaa keessa diriirfattee dubbisaa jirti
"Asitti yeroo qophaatti callisee dubbisuu qabachuu nan danda'a garuu yeroo irbaataatti namoota biroo waliin walarguunis kitaabota attamii dubbisuu akkan qabus namoota biroo dubbisanirraa argachuu nan danda'a."
Qorannoon mootummaa bara 2014 akka agrsiisutti namoonni umuriin isaanii 25 hanga 39 ta'an keessaa %41 yeroo durii gadi bashannanaaf akka dubbisan dubbatu. Ga'eessota Ingliizi arka afur keessaa tokko bashannaaf kitaaba tokkolle hin dubbisne.
Bareessitoonni bebbeekamoo Ingliiz Suuzaan Hiiliifi Howaardi Jaakobsaan araadaa dijitaalaa qabaachuun keenya qalbiidhaan dubbisuufi dandeettii yeroo dheeraaf dubbisuu keenya balleessaa jira jechuun akeekkachiisaniiru.
Bakka agarsiisa dubbisaatti, bilbilaafi taabileetiin hin dhowwamne garuu gijiitaala irraa of ittisuu jajjabeessuuf jecha Kiressendaafi Saaraan namarraa fudhatu.
''spa' irra siif wayya'
Haati warraa Roobiisi akka keennaa guyyaa dhalootaa isaatti agarsiisaa bitteef, innis kitaabota hedduu qabatee gara minjaala yeroo hedduu itti dubbisuu deema.
"Mana keessatti maatiif yeroo kennuu dhiisanii kitaaba dubbisuun akka waan maatiirraa dhimma hin qabaanneetti namatti dhaga'ama. Bakka agarsiisa kitaabaa deemanii dubbisuun garuu nan kaffale jettee yaaddee qalbiin dhimmamtee dubbista."
"Dhimmi isaa, asitti hiriyyoota waliin ykn waahelan waliin mitti kan jirtu. Xiqqoo dubbisuu jettee yeroo xiqqooodhaaf eyyama gaafachuun si hin barbaachisu. Yeroo hundaa dubbisuuf sii eyyamamaadha," jetti Kiressendaan.
Kiressendaa " dubbisuun waan dhibaa'ummaan hojjetamu miti," jetti. "Dubbisuu jechuun sirriitti qalbii guutuudhaan duukaa bu'uudha. Aka saayintistoonni jedhanitti dubbisuun sammuu namaatiif waan gaarii hojjeta akkasumas fayyaafis waan gumaachu qaba. kana waan ta'eef, 'spa irra siif wayya."